धरान १७ मा सुरु भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम - Everest Daily News
धरान १७ मा सुरु भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
धरान । धरानमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । काम नभएर वेरोजगार भएर बसेका यूवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी दिलाएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २० बाट शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम धरानको वडा नं. १६ मा सञ्चालनमा आईसकेको छ भने मङ्गलबारदेखि धरानको वडा नं. १७ मा सुरु भएको छ ।
रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका रोजगारदातालाई धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राई, सामाजिक शाखाका वरिष्ठ अधिकृत गणेश प्रशाद खतिवडा, कार्यवाहक वडाध्यक्ष सुवास वर्देवासहितको टोलीले आवश्यक पर्ने औजार सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका छन् । १७ नं. वडामा रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत ५ जना छनौट भएका छन् । उनीहरुलाई ३ थान हसियाँ, २ थान दाउ, बुट (जुत्ता), टोपी, ग्लोब्स (पञ्जा) र एप्रोन प्रदान गरिएको छ । उनीहरु धरान १७ स्थित रहेको सप्तरङ्गी पार्कमा झाँडी फडानी गर्ने र रुख तथा बोट विरुवाको हाँगा काट्ने काम दिइएको छ । उनीहरुले आजै बाट काम गर्न सुरु गरेको छ । दैनिक रुपमा प्रतिव्यक्ति एक जनाले ५ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछ ।
मेयर राईले धरानको २० नं. वडाबाट थालिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यस वर्ष धरानमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले १७ नं. सहित अहिले २१ जनाले रोजगारी पाएको बताउनुभयो । यो वर्ष रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत धरान उपमहानगरका १ सय ५७ जनाले एक सय दिनको लागि काम पाउने छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले १५, १६ वटा आयोजनाहरु छनौट गरेका छन् । निरन्तर सय दिन खटेर आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य र अधिकार पुरा गर्न मेयर राईले आग्रह गर्नु भएको छ ।
धरानको खोलामा अवैध रुपमा उत्खनन्, उपमहानगरपालिकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण
कारागारमा क्षमताभन्दा छ गुणा बढी कैदीबन्दी